Kardinaly Tsarahazana Désiré: “Tsy manohana kandida ny katolika” | NewsMada
Kardinaly Tsarahazana Désiré: “Tsy manohana kandida ny katolika”
Mazava ny hafatra. “Efa miomana sy mihetsiketsika fatratra ireo kandidà ho filoham-pirenena. Tsara ny mampahafantatra ary mamerimberina etoana fa tsy manana kandidà ofisialy tohanana na haroso amin’izany fifidianana izany ny fiangonana katolika”, hoy ny fanambarana nataon’ny kardinaly, ny Mgr Tsarahazana Desiré, omaly. Nambarany anefa fa azon’ ireo vovonana na vondrona na fikambanana maro samihafa amin’ny maha olom-pirenena azy ny mivondrona manohana kandidà, heverina fa afaka hamaly ny filàny sy ny hetahetany. “Manana ny safidiko aho amin’ny maha kardinaly ahy satria olom-pirenena manana zo hifidy sy hisafidy aho”, hoy ihany ny filohan’ny Fivondronamben’ny eveka (Fem).
Kandidà nampiasa ny sarin’ny kardinaly
Notsipihiny manokana fa tsy nahazoana fankatoavana avy aminy ireo kandidà mampiasa ny sariny na ny anarany na ireo eveka hafa mba atao fitaovana fampielezan-kevitra. Nisy kandidà filoham-pirenena iray rahateo araka ny fantatra, sahy nanamboatra kalandrie ahitana ny sariny sy ny kardinaly Tsarahazana ary nanaparitaka izany aty Antananarivo.
Fifidianana ao anatin’ny fitoniana
Nitodika amin’ny kristianina sy ny vahoaka malagasy ny tenany, avy eo, amin’izao hiatrehana ny fifidianana izao. “Adidintsika ny mifidy ny kandidà heverintsika fa afaka mampandroso sy mampivoatra marina ny firenentsika. Manentana ny tsirairay mba hifidy an-kalalahana ny olona hitany sy tsapany fa afaka hanasoa ny firenena”, hoy ihany ny kardinaly Tsarahazana Desiré. Manantena ny tenany fa ho ao anatin’ny fitoniana izany fifidianana izany.